Faritra Alaotra: « Tsy ahiahina ny voka-bary amin’ity taona ity », hoy ny minisitera | NewsMada
Faritra Alaotra: « Tsy ahiahina ny voka-bary amin’ity taona ity », hoy ny minisitera
Par Taratra sur 05/03/2020
Tohodrano telo simba any namin’ny faritra Alaotra vokatry ny tondra-drano maro, saika nandritra ny volana febroary lasa teo. Ny tohodrano iray ao amin’ny kaominina Tanambe, Ampita andrefana aloha no efa vita, araka ny nambaran’ny ao amin’ny minisiteran’ny Fambolena, fiompiana, jono. Nilaza ny ao amin’ny minisitera fa nitondrana fanampiana masomboly ireo tantsaha, afahana miverina mamboly fanindroany. Ny ao amin’ny minisitera ihany, nilaza fa tsy ahina ny voka-bary amin’ity taona ity, na teo aza ireny andro ratsy ireny.
Aorian’ny fotoana toa ireny, tsy maintsy jerena ny vahaolana vonjimaika sy maharitra ho fanampiana ireo tantsaha ireo. Hatrany amin’ny 60 ha ny fantatra fa simban’ny rano ny voly vary ka izao hiverenana izao indray. Misy anefa ireo mpamboly tsy mahazo izany masomboly izany noho ny toerana lavitra, na fitsinjarana azy tsy mitovy eny anivon’ny kaominina. Tsy vitsy ny mpamboly mangataka fanohanana, mampita ny fitarainan’izy ireo manomboka ao amin’ny kaominina hatrany amin’ny faritra, ary ny ao amin’ny faritra indray tokony hitondra izany any amin’ny minisitera.
Tsy izay anefa no hita fa ny minisitera mamaritra mialoha ny fepetra raisiny, tonga amin’izao fizarana masomboly izao. Amin’ny mpamboly sasany anefa, tsy olana ny masomboly fa ny fikojakojana ny tohadrano sy ny lakan-drano. Tsy vao sambany akory ny fotoam-pahavaratra fa raha tsara fipetraka ireny fotodrafitrasa ireny, tsy misy fiantraikany any amin’ny tanimbary. Asan’ny minisiteran’ny Fambolena izany, fa manana adidy lehibe ihany koa ny mpamboly sy ny mpitantana isan’ambaratonga any amin’ny faritra.